Rakkoo nageenyaa: Dirree Dhawaan har'allee hin tasgabboofne - BBC News Afaan Oromoo
Wiixata darbe wayita taaboti galee ba'u fulaa poolis mareet jedhamutti kan eegale hookkarri magaalaa Dirre Dhawaa har'allee itti fufeera.
Jiraattonni magaalaa Dirre Dhawaa bilbilaan dubbisne akka nutti himanitti har'as ganamarraa eegalee dargaggoonni hirrira bahuun sagalee mormii olkaasuun dhageessisaa turan, darbee darbee dhagaanis darbatamaa ture jedhan.
Gaaffiin dargaggootaa walirratti kuufamaa dhufee, yeroo ammaa kana hanqinni carraa hojii, haqnii fi walqixxummaan dhibamuu akkasumallee hanqinni bulchiinsa gaarii gaaffii ijoo ta'aniiru.
Keessattuu dhaadannoowwan akka ''jaalala Dirre Dhawaa nu jalaa hin booressinaa,sabaan nu hin qoqqoodinaa, sirna bulchiinsaa 40/40/20 jedhamu nurraa kaasaa'' kanneen jedhan turaniiru.
Dirree Dhawaatti mallattoon dallaa mana namootaarratti dibame sodaa uume
Gara waaree Dirre Dhawaa naannawa Raas Veel ''kantiibaan haa bu'u, sagalen keenya haa dhagahamu'' dhaadannoowwan jedhan dhageessifamaa turan. Dargaggoonni 300 ta'an kanneen karaa kana darbaa turan alaabaa qabatanii mormiisaanii dhageessisuurraan kan hafe rakkoo biraa akka hin qaqqabsiisne jiraataan magaalattii Obbo Salamoon Hayilee nutti himaniiru.
Kaleessaa fi dheengadda baankonni cufaatti akka oolanii fi sochiin magaalattiis hangi tokko jeeqamee akka turellee dubbataniiru. Hookkarri kun kutaa magaalatti hunda kan weerare ta'uu baatullee iddoowwan hojii daldalaa ijoo ta'an akka danqamanii jiran nutti himan jiraattonni.
''Dargaggoonni wayita gurmuudhaan girrisanii dhufan suuqiiwwan ni cufamu. Wayita xiqqoo qabbanaa'ummoo deebi'anii banamu'' jedhan Obbo Salamoon.
Har'a fulaa Kaziiraa, kaleessammoo fulaa GTZ jedhamu akkasumallee naannawa Yuuniversitii Dirre Dhawaa poolisoonnii fi dargaggoonni walgaarreffachaadhaan akka turan namoonni ijaan argan nutti himaniiru.